ကြီးစွာသောဒုက္ခအတွင်းမှာ ဘိသိက်ခံတွေဟာ ကောင်းကင်ကို အရှင်လတ်လတ် ‘ချီဆောင်’ ခံရမလား။ |လေ့လာရန်ဆာင်းပါး
‘သင်တို့ကို ရွေးနုတ်သောအချိန်ကာလ ရောက်လုနီးပြီ’
ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ ကျွန်တော့်ရဲ့ကနဦးမေတ္တာကို အမှတ်ရခြင်းက ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ ကူညီပေး
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဇူလိုင် ၂၀၁၅
ဖတ်လို ကင်ဘွန်ဒူ ကမ္ဘောဒီးယား ကရင် (စကော) ကာချီကွီး (အရှေ့ပိုင်း) ကီကွန်ဂို ကီချူဝါ (ကူဇ်ကို) ကီချူဝါ (အန်ကက်ရှ်) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကီစုန်ဂီ ကီလူဘာ ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ခိုလ် ဂရင်းလန်း ဂါ ဂါရီဖူနာ စပိန် စီပီဒိုင် ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆွာတီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဇူးလူး တဆောန်ဂါ တလာပနက် တဟီတီ တိုဂျိုလာဘယ်လ် တိုတာနက် တွီ ဒန်မီ နာဝါ့တ် (မြောက်ပိုင်း ပီဘလာ) နာဝါ့တ် (ဟွာစတီကာ) နာဝါ့တ် (အလယ်ပိုင်း) ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဗန်ဒါ မမ် မားဇတက် (ဟွာ့တလာ) မီးစ် (မြောက်ပိုင်း အလယ်) မုန် (အဖြူ) မော်လ်တီစ် မြန်မာ ရှိုစာ လင်ဂါလာ လာအိုတရန် ဝေယူနာအီကီ အင်ဂါဘာရီ အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒွန်ဂါ အင်္ဂလိပ် အမ်ဘွန်ဒူ အာဖရိက အိုတီတီလာ အီတလီ အီဘန် အေးဝေး
“သင်တို့ကို ရွေးနုတ်သောအချိန်ကာလ ရောက်လုနီးသည်ကို ထောက်သဖြင့် မတ်မတ်ရပ်၍ ခေါင်းကိုမော့ကြလော့။”—လု. ၂၁:၂၈။
သီချင်း– ၁၃၃၊ ၄၃
အေဒီ ၆၆ မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ဘယ်ဖြစ်ရပ်တွေကို မကြာခင် ကြုံတွေ့ရမလဲ။
“မဟာဗာဗုလုန်” ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် ဘယ်စမ်းသပ်ရာကာလ ရောက်လာမလဲ။
မဿဲ ၂၄:၃၁ မှာပြောထားတဲ့ စုသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းက ဘာကို ဆိုလိုသလဲ။
၁။ အေဒီ ၆၆ မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ။ (ဆောင်းပါးအစမှာပါတဲ့ ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။)
သင်ဟာ အေဒီ ၆၆ တုန်းက ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ နေထိုင်နေတဲ့ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ အခြေအနေတွေ ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ ဖလောရပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ ရောမဘုရင်ခံက ဗိမာန်တော်ဘဏ္ဍာတိုက်ထဲက တဲလင့် ၁၇ ခုကို သိမ်းယူလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ဂျူးတွေ သိပ်စိတ်ဆိုးပြီး ရောမစစ်သားအများကြီးကို သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးနောက် လွတ်လပ်ရေး ကြေညာလိုက်တယ်။ ရောမဘက်ကလည်း ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ သုံးလအတွင်းမှာ စက်စ်တီးယပ်စ် ဂဲလပ်စ် ဦးဆောင်တဲ့ ရောမစစ်သား ၃၀,၀၀၀ ဟာ ဂျေရုဆလင်မြို့ကို လာဝိုင်းတယ်။ ဂျူးသူပုန်တွေ တပ်ဆုတ်သွားပြီး ဗိမာန်တော်မှာ အကာအကွယ်ယူကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောမစစ်သားတွေက ဗိမာန်တော်ကို ကာရံထားတဲ့ အပြင်တံတိုင်းနား တဖြည်းဖြည်းရောက်လာပြီး တံတိုင်းကို ဖြိုဖျက်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ မြို့ထဲမှာရှိသူတိုင်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို သင် မြင်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။
၂။ ဂျေရုဆလင်မြို့ကို ရောမစစ်တပ် လာဝိုင်းတဲ့အခါ ခရစ်ယာန်တွေ ဘာလုပ်ရမလဲ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးရသွားသလဲ။
၂ “ဂျေရုဆလင်မြို့ကို စစ်တပ်ဝိုင်းရံလျက်ရှိကြောင်း သင်တို့မြင်သောအခါ ထိုမြို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လုနီးပြီဟု သိမှတ်ကြလော့။ ထိုအခါ ယုဒနယ်၌ရှိသောသူတို့သည် တောင်ပေါ်သို့ ပြေးကြစေ။ မြို့ထဲ၌ရှိသောသူတို့သည် မြို့ပြင်သို့ ထွက်ကြစေ။ တောရွာမှာရှိသောသူတို့သည် မြို့ထဲသို့ မဝင်ကြစေနှင့်” ဆိုတဲ့ ယေရှုရဲ့စကားတွေကို သင် သတိရမိမှာ သေချာတယ်။ (လု. ၂၁:၂၀၊ ၂၁) ဒါပေမဲ့ ဂျေရုဆလင်မြို့ကို ရောမစစ်သားတွေ ဝိုင်းထားတဲ့အတွက် ယေရှုရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မြို့ထဲကနေ ထွက်ပြေးဖို့ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ အံ့သြစရာတစ်ခု ဖြစ်ပျက်လာတယ်။ ရောမစစ်တပ်က ဂျေရုဆလင်မြို့ကနေ ရုတ်တရက် ဆုတ်ခွာသွားတယ်။ ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်း သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာ ‘တိုတောင်း’ ခဲ့တယ်။ (မ. ၂၄:၂၂) ရောမစစ်တပ် ဆုတ်ခွာသွားပြီဖြစ်လို့ သစ္စာရှိခရစ်ယာန်တွေဟာ ယေရှုရဲ့စကားကို နားထောင်ပြီး တောင်ပေါ်ကို ချက်ချင်းထွက်ပြေးဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ * အေဒီ ၇၀ ရောက်တဲ့အခါ ရောမစစ်တပ် နောက်တစ်တပ်က ဂျေရုဆလင်မြို့ကို ချီတက်လာတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ မြို့ကို ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေရှုရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကို နာခံသူအားလုံး အသက်ဘေးကနေ လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။
၃။ ခရစ်ယာန်တွေဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ ဘယ်အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ကြုံရတော့မလဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဘယ်အကြောင်း ဆွေးနွေးမလဲ။
၃ ယေရှုရဲ့ သတိပေးချက်နဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ခေတ်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာ အလားတူအခြေအနေမျိုး ကျွန်တော်တို့ ကြုံရတော့မယ်။ ယေရှုက “ကြီးစွာသောဒုက္ခ” ရုတ်တရက်စတင်ချိန်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ပထမရာစု ဖြစ်ရပ်တွေကိုသုံးပြီး ရှင်းပြခဲ့တယ်။ (မ. ၂၄:၃၊ ၂၁၊ ၂၉) ဂျေရုဆလင်မြို့ ပျက်စီးချိန်မှာ သစ္စာရှိခရစ်ယာန်တွေ လွတ်မြောက်ခဲ့သလို “လူအုပ်ကြီး” ဟာ လာမယ့် ကမ္ဘာချီကပ်ဘေးကနေ လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။ (ဗျာဒိတ် ၇:၉၊ ၁၃၊ ၁၄ ကိုဖတ်ပါ။) အဲဒီအနာဂတ်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းစာမှာ ကြိုပြောထားတာကို ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်နဲ့ ပတ်သက်နေလို့ပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေက ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးစီနဲ့ ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးကြည့်ကြစို့။
၄။ ကြီးစွာသောဒုက္ခ ဘယ်လိုအစပြုမလဲ။
၄ ကြီးစွာသောဒုက္ခ ဘယ်လိုအစပြုမလဲ။ အယူမှားဘာသာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ အစပြုပါလိမ့်မယ်။ ကျမ်းစာမှာ အယူမှားဘာသာကို ‘ပြည့်တန်ဆာတွေရဲ့ အမိ၊ မဟာဗာဗုလုန်’ လို့ ခေါ်ထားတယ်။ (ဗျာ. ၁၇:၅-၇) အယူမှားဘာသာကို ပြည့်တန်ဆာလို့ ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အယူမှားဘာသာရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာမရှိလို့ပဲ။ သူတို့ဟာ ယေရှုနဲ့ သူ့ရဲ့နိုင်ငံကို သစ္စာရှိရှိထောက်ခံမယ့်အစား နိုင်ငံရေးမှာ သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ လူ့အစိုးရတွေကို ထောက်ခံပြီး ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်တွေကို လျစ်လျူရှုကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝတ်ပြုမှုဟာ ဘိသိက်ခံတွေရဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ဝတ်ပြုမှုနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ (၂ ကော. ၁၁:၂; ယာ. ၁:၂၇; ဗျာ. ၁၄:၄) ဒါဆို မဟာဗာဗုလုန်ကို ဘယ်သူဖျက်ဆီးမလဲ။ ယေဟောဝါဟာ “မိမိ၏အကြံတော်ကို” “ချိုဆယ်ချောင်း” ရှိတဲ့ “နီမြန်းသောသားရဲ” ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲ သွင်းပေးလိမ့်မယ်။ “နီမြန်းသောသားရဲ” ဟာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကို ပုံဆောင်ပြီး “ချိုဆယ်ချောင်း” ကတော့ သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးကို ပုံဆောင်တယ်။—ဗျာဒိတ် ၁၇:၃၊ ၁၆–၁၈ ကိုဖတ်ပါ။
၅၊ ၆။ မဟာဗာဗုလုန် ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါ သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံး သေဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဘာကြောင့်ပြောနိုင်သလဲ။
၅ အယူမှားဘာသာဖြစ်တဲ့ မဟာဗာဗုလုန် ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါ သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံး သေဆုံးသွားမလား။ မသေဆုံးပါဘူး။ အဲဒီအချိန်အကြောင်းရေးဖို့ ပရောဖက်ဇာခရိကို ယေဟောဝါ လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်က အယူမှားဘာသာမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်က– ‘“ကျွန်တော်ဟာ ပရောဖက်မဟုတ်ပါဘူး။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးသူပါ။ လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်အဖြစ်ဝယ်ထားတာပါ” လို့ပြောလိမ့်မယ်။ “ကိုယ်ပေါ်က ဒဏ်ရာတွေက ဘာဒဏ်ရာတွေလဲ” လို့ သူ့ကိုမေးတဲ့အခါ “ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေပါ” လို့ ပြန်ပြောလိမ့်မယ်။’ (ဇာ. ၁၃:၄-၆၊ ကဘ) ဒါကြောင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတောင် ဘာသာတရား မလိုက်စားဟန်ဆောင်ပြီး အယူမှားဘာသာမှာ မပါဝင်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ငြင်းဆိုကြလိမ့်မယ်။
၆ အဲဒီအတောအတွင်း ဘုရားသခင့်လူမျိုးအတွက် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ ယေရှု ဒီလိုရှင်းပြတယ်– “ထိုနေ့ရက်ကာလကို တိုစေတော်မမူလျှင် မည်သူမျှ ဘေးလွတ်မည်မဟုတ်။ ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့အတွက် ထိုနေ့ရက်ကာလကို တိုစေတော်မူလိမ့်မည်။” (မ. ၂၄:၂၂) ပထမရာစုတုန်းက ဂျေရုဆလင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒုက္ခကာလဟာ ‘တိုတောင်း’ ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ‘ရွေးချယ်ခံရသူတွေ’ ဖြစ်တဲ့ ဘိသိက်ခံခရစ်ယာန်တွေ ထွက်ပြေးခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုပဲ၊ ကြီးစွာသောဒုက္ခရဲ့ အစပိုင်းဟာ ‘ရွေးချယ်ခံရသူတွေ’ အတွက် ‘တိုတောင်း’ ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ “ချိုဆယ်ချောင်း” ဟာ ဘုရားသခင့်လူမျိုးကို ဖျက်ဆီးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား အစပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးတာနဲ့ ခဏတဖြုတ် အေးချမ်းငြိမ်သက်နေလိမ့်မယ်။
၇၊ ၈။ အယူမှားဘာသာ ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် ဘယ်အခွင့်အရေးရရှိမလဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘုရားသခင့်လူမျိုးဟာ တခြားသူတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားမလဲ။
၇ အယူမှားဘာသာ ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် ဘာဖြစ်မလဲ။ အဲဒီအချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ရင်းမှန်ကို ဖော်ပြရမယ့်အချိန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လူအများစုဟာ ‘တောင်များရှိ ကျောက်ဆောင်များ’ နဲ့တူတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆီကနေ အကူအညီနဲ့ ကာကွယ်မှုရဖို့ ကြိုးစားကြလိမ့်မယ်။ (ဗျာ. ၆:၁၅-၁၇) ဒါပေမဲ့ ယေဟောဝါရဲ့လူမျိုးကတော့ အကာအကွယ်ရဖို့ ယေဟောဝါကို အားကိုးကြလိမ့်မယ်။ ပထမရာစုတုန်းက ခဏတဖြုတ် ငြိမ်သက်ချိန်ဟာ ဂျူးအားလုံး ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ ပြောင်းလာရမယ့်အချိန် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးသူတွေ ယေရှုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဂျေရုဆလင်မြို့ကနေ ထွက်ပြေးရမယ့်အချိန် ဖြစ်တယ်။ အလားတူပဲ၊ မဟာဗာဗုလုန် တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ခဏတဖြုတ် ငြိမ်သက်ချိန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲ လူများစွာ ပြောင်းဝင်လာမယ်လို့ မမျှော်လင့်နိုင်ဘူး။ အဲဒီအစား ခရစ်ယာန်စစ်တွေအနေနဲ့ ယေဟောဝါကိုချစ်ကြောင်း၊ ဘိသိက်ခံတွေကို ထောက်ခံကြောင်း သက်သေပြဖို့ အခွင့်အရေးရရှိမယ့်အချိန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။—မ. ၂၅:၃၄-၄၀။
ခရစ်ယာန်စစ်တွေအနေနဲ့ ယေဟောဝါကိုချစ်ကြောင်း၊ ဘိသိက်ခံတွေကို ထောက်ခံကြောင်း သက်သေပြဖို့ အခွင့်အရေး ရရှိပါလိမ့်မယ်
၈ အဲဒီစမ်းသပ်ရာကာလအတွင်း ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အတိအကျမသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခက်အခဲတွေ ကြုံရမယ်၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံစရာတွေ ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားရမယ်။ ပထမရာစု ခရစ်ယာန်တွေဟာ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေကို စွန့်ပြီး အခက်အခဲတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရတယ်။ (မာ. ၁၃:၁၅-၁၈) ကျွန်တော်တို့လည်း ‘ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ငါအသင့်ရှိသလား။ ယေဟောဝါအပေါ် သစ္စာစောင့်သိဖို့ ဘယ်အရာကိုမဆို လိုလိုလားလား လုပ်ဆောင်လိုစိတ်ရှိသလား’ လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးသင့်တယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ပရောဖက်ဒံယေလကိုတုပပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ယေဟောဝါကို ဆက်ဝတ်ပြုနေသူတွေဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ပဲ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။—ဒံ. ၆:၁၀၊ ၁၁။
မကြာခင် “အဆုံး” ရောက်လာတော့မယ်
၉၊ ၁၀။ (က) ကြီးစွာသောဒုက္ခအတွင်း ဘယ်သတင်းကို ဘုရားသခင့်လူမျိုး ကြေညာကြမလဲ။ (ခ) ဘုရားသခင့်လူမျိုးရဲ့ ရန်သူတွေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။
၉ ကြီးစွာသောဒုက္ခကာလဟာ ‘နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်း’ ဟောရမယ့်အချိန် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီသတင်း ဟောရမယ့်အချိန်ဟာ ပြီးဆုံးသွားပြီ။ မကြာခင် “အဆုံး” ရောက်လာတော့မယ်။ (မ. ၂၄:၁၄) ဘုရားသခင့်လူမျိုးဟာ ပြင်းထန်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းသတင်းကို ရဲရဲရင့်ရင့် ကြေညာကြလိမ့်မယ်။ စာတန့်လောကဆိုး လုံးလုံးဖျက်ဆီးခံရတော့မယ့်သတင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျမ်းစာမှာ အဲဒီသတင်းကို မိုးသီးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အခုလိုပြောထားတယ်– “မိုးသီးတစ်လုံးလျှင် လေးဆယ့်ငါးပေါင်မျှ အလေးချိန်ရှိသော မိုးသီးကြီးများသည် ကောင်းကင်မှ လူတို့အပေါ်သို့ ကျလေ၏။ မိုးသီးကပ်ဘေးသည် အလွန့်အလွန် ကြီးမားသဖြင့် ထိုကပ်ဘေးကြောင့် လူတို့သည် ဘုရားသခင်အား စော်ကားကြ၏။”—ဗျာ. ၁၆:၂၁။
၁၀ အဲဒီပြင်းထန်တဲ့သတင်းကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်သူတွေ ကြားရလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ မာဂေါဂပြည်သား ဂေါဂမင်းလို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အုပ်စုတစ်စု ဘယ်လို တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကို ပရောဖက်ယေဇကျေလ အခုလိုပြောတယ်– ‘အချုပ်အခြာအာဏာရှင်ယေဟောဝါ ဒီလိုပြောတယ်– “အဲဒီနေ့မှာ သင့်စိတ်ထဲ အကြံအစည်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ယုတ်မာတဲ့အကြံကို သင်ကြံစည်လိမ့်မယ်။ ‘အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ ရွာတွေရှိတဲ့ပြည်ကို ငါကျူးကျော်မယ်။ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ နေထိုင်နေသူတွေကို ငါလာတိုက်မယ်။ သူတို့အားလုံးက မြို့ရိုးတွေ၊ ကန့်လန့်တန်းတွေ၊ ဂိတ်တံခါးတွေမရှိတဲ့ရွာတွေမှာ နေထိုင်နေကြတယ်’ လို့ သင်ပြောလိမ့်မယ်။ အကြီးအကျယ် တိုက်ခိုက်လုယက်ပြီး တိုက်ရာပါပစ္စည်းတွေကို သိမ်းသွားဖို့၊ တစ်ချိန်တုန်းကပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့ အခု လူတွေနေထိုင်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ လူမျိုးတွေထဲကနေ ပြန်စုသိမ်းခံရသူတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ သင်ကြံစည်လိမ့်မယ်။ သူတို့က စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေစုဆောင်းမိပြီး မြေကြီးရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာ နေထိုင်နေကြတယ်။”’ (ယေဇ. ၃၈:၁၀-၁၂၊ ကဘ) ဘုရားသခင့်လူမျိုးဟာ “မြေကြီးရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာ နေထိုင်နေ” တဲ့အလား တခြားသူတွေနဲ့ သိသိသာသာ ကွာခြားနေလိမ့်မယ်။ တိုင်းနိုင်ငံတွေဟာ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ယေဟောဝါရဲ့ ဘိသိက်ခံတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကို တိုက်ခိုက်ချင်စိတ် ပြင်းပြနေပါလိမ့်မယ်။
၁၁။ (က) ကြီးစွာသောဒုက္ခအတွင်း ဖြစ်ပျက်မယ့် ဖြစ်ရပ်အစဉ်လိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသိထားရမလဲ။ (ခ) နိမိတ်လက္ခဏာတွေကို လူတွေ မြင်တဲ့အခါ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
၁၁ ပြီးနောက် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။ ဘာပြီးရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အစဉ်လိုက်ကို ကျမ်းစာမှာ အတိအကျ မဖော်ပြထားပေမဲ့ တချို့ ဖြစ်ရပ်တွေက တစ်ချိန်တည်းမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ ဒီလောကစနစ်ရဲ့ နိဂုံးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယေရှု အခုလိုကြိုပြောခဲ့တယ်– “ထိုအခါ နေ၊ လ၊ ကြယ်နက္ခတ်များ၌ နိမိတ်လက္ခဏာများ ထင်ရှားလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာလည်း ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုး ဟုန်းသံကြောင့် လူအမျိုးမျိုးတို့သည် အလွန်စိတ်ပူပန်၍ ကြံရာမရဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ လူတို့သည် မြေကြီးပေါ်၌ ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများကိုမျှော်၍ ကြောက်လန့်သဖြင့် မေ့မြောသွားကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ကောင်းကင်တန်ခိုးများ တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ မဟာဘုန်းတန်ခိုးတော်ကိုဆောင်လျက် မိုးတိမ်ကိုစီး၍ လူသားကြွလာတော်မူသည်ကို မြင်ကြရလိမ့်မည်။” (လု. ၂၁:၂၅-၂၇; မာကု ၁၃:၂၄–၂၆ ကိုဖတ်ပါ။) ဒီပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံချိန်မှာ ထိတ်လန့်စရာ နိမိတ်လက္ခဏာတွေ ကောင်းကင်မှာ တကယ်ဖြစ်လာမလား။ စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားသခင့်ရန်သူတွေဟာ အဲဒီနိမိတ်လက္ခဏာတွေကို မြင်ပြီး ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ ကြမယ်ဆိုတာ သေချာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကယ်တင်ခံရမယ်ဆိုတာ သိထားတဲ့အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိနိုင် (အပိုဒ် ၁၂၊ ၁၃ ကိုကြည့်ပါ)
၁၂၊ ၁၃။ (က) ယေရှု “မဟာဘုန်းတန်ခိုး” နဲ့ ပြန်ကြွလာတဲ့အခါ ဘာဖြစ်မလဲ။ (ခ) အဲဒီအချိန်မှာ ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်တွေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။
၁၂ ယေရှု “မဟာဘုန်းတန်ခိုး” နဲ့ ပြန်ကြွလာတဲ့အခါ ဘာဖြစ်မလဲ။ သစ္စာရှိသူတွေကို ဆုပေးပြီး သစ္စာမရှိသူတွေကို ဒဏ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ (မ. ၂၄:၄၆၊ ၄၇၊ ၅၀၊ ၅၁; ၂၅:၁၉၊ ၂၈-၃၀) ယေရှုက ပုံဥပမာတစ်ခုသုံးပြီး အဲဒီအကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်– “လူသားသည် မိမိဘုန်းတော်ကိုဆောင်လျက် ကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ ကြွလာတော်မူသောအခါ ဘုန်းရှိသောပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်၍၊ လူမျိုးအပေါင်းတို့ကို ရှေ့တော်၌ စုဝေးစေပြီးလျှင် သိုးထိန်းသည် သိုးနှင့်ဆိတ်တို့ကို ခွဲခြားသကဲ့သို့ လူတို့ကို ခွဲခြားလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်သည် သိုးတို့ကို လက်ယာဘက်၊ ဆိတ်တို့ကို လက်ဝဲဘက်တွင် ထားတော်မူမည်။” (မ. ၂၅:၃၁-၃၃) သိုးနဲ့ဆိတ်တွေ ဘယ်လို တရားစီရင်ခံရမလဲ။ သစ္စာမရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ ဆိတ်တွေဟာ “ထာဝရသေဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရ” မှာဖြစ်ပြီး သစ္စာရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ သိုးတွေကတော့ ထာဝရအသက်ဆု ရရှိမှာဖြစ်တယ်။—မ. ၂၅:၄၆။
၁၃ ဆိတ်တွေဟာ သူတို့ဖျက်ဆီးခံရမှာကို သိတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ။ “ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ” ပါလိမ့်မယ်။ (မ. ၂၄:၃၀) ဘိသိက်ခံတွေနဲ့ သူတို့ကို ထောက်ခံသူတွေကော။ သူတို့ကတော့ “ထိုအမှုအရာတို့သည် ဖြစ်စရှိသောအခါ သင်တို့ကို ရွေးနုတ်သောအချိန်ကာလ ရောက်လုနီးသည်ကို ထောက်သဖြင့် မတ်မတ်ရပ်၍ ခေါင်းကိုမော့ကြလော့” လို့ ယေရှုမိန့်မှာတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြပါလိမ့်မယ်။—လု. ၂၁:၂၈။
၁၄၊ ၁၅။ မာဂေါဂပြည်သား ဂေါဂမင်း စတင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ဘယ်စုသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်မလဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။
၁၄ ဘုရားသခင့်လူမျိုးကို မာဂေါဂပြည်သား ဂေါဂမင်း စတင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ဘာဖြစ်မလဲ။ “လူသားသည် ကောင်းကင်တမန်တို့ကို စေလွှတ်၍ မိမိရွေးကောက်သောသူတို့ကို မြေကြီးစွန်းမှ ကောင်းကင်စွန်းတိုင်အောင် အရပ်လေးမျက်နှာမှ စုရုံးစေတော်မူလိမ့်မည်” လို့ ကျမ်းစာပြောတယ်။ (မာ. ၁၃:၂၇; မ. ၂၄:၃၁) ဒီစုသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဟာ ဘိသိက်ခံတွေကို စတင်ရွေးကောက်တဲ့အချိန်ကို မဆိုလိုဘူး။ မြေကြီးပေါ်ကျန်နေသေးတဲ့ ဘိသိက်ခံတွေကို နောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်တဲ့အချိန်ကိုလည်း မဆိုလိုဘူး။ (မ. ၁၃:၃၇၊ ၃၈) အဲဒီနောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဟာ ကြီးစွာသောဒုက္ခမစခင်လေးမှာ ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။ (ဗျာ. ၇:၁-၄) ဒါဆို စုသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းက ဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ ဒါက မြေကြီးပေါ်ကျန်နေသေးတဲ့ ဘိသိက်ခံတွေ ကောင်းကင်ဆုကျေးဇူးရရှိမယ့်အချိန်ကို ဆိုလိုတယ်။ (၁ သက်. ၄:၁၅-၁၇; ဗျာ. ၁၄:၁) အဲဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ဘုရားသခင့်လူမျိုးကို မာဂေါဂပြည်သား ဂေါဂမင်း စတင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ (ယေဇ. ၃၈:၁၁) ပြီးနောက် ယေရှုပြောထားတဲ့အတိုင်း “ဖြောင့်မတ်သူတို့သည် မိမိတို့အဖ၏နိုင်ငံတော်တွင် နေကဲ့သို့ ထွန်းလင်းကြ” ပါလိမ့်မယ်။—မ. ၁၃:၄၃။ *
၁၅ ဒါက ဘိသိက်ခံတွေဟာ ကောင်းကင်ကို “အရှင်လတ်လတ် ချီဆောင်ခံရ” မယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။ ခရစ်ယာန်ဘောင်ထဲက လူများစွာကတော့ ခရစ်ယာန်တွေဟာ ကောင်းကင်ကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ချီဆောင်ခံရမယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ မြေကြီးကို အုပ်ချုပ်ဖို့ ယေရှုပြန်ကြွလာတာကိုလည်း ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်ရမယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ‘လူသားရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာဟာ ကောင်းကင်မှာ ထင်ရှား’ မယ်၊ ယေရှုဟာ “မိုးတိမ်ကိုစီး” ပြီး ကြွလာမယ်လို့ ကျမ်းစာမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတယ်။ (မ. ၂၄:၃၀) ဒါကြောင့် ယေရှုဟာ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။ ဒါ့အပြင် “လူ့အသွေးအသားသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေမခံနိုင်” လို့လည်း ကျမ်းစာပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းကင်ကို ခေါ်ဆောင်ခံရမယ့်သူတွေဟာ ‘နောက်ဆုံးတံပိုးမှုတ်တဲ့အခါ တစ်ခဏချင်း မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း’ အရင်ဆုံး “ပြောင်းလဲ” ရမှာဖြစ်တယ်။ * (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၅၀–၅၃ ကိုဖတ်ပါ။) မြေကြီးပေါ်ကျန်နေသေးတဲ့ ဘိသိက်ခံအကြွင်းအကျန်တွေဟာ ချက်ချင်း စုသိမ်းခံရမှာဖြစ်တယ်။
၁၆၊ ၁၇။ သိုးသငယ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲ မစခင် ဘာဖြစ်ရမလဲ။
၁၆ ၁၄၄,၀၀၀ အားလုံး ကောင်းကင်ရောက်သွားတာနဲ့ သိုးသငယ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် အပြီးသတ်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ (ဗျာ. ၁၉:၉) ဒါပေမဲ့ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ် မတိုင်ခင် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ဦးမယ်။ ဘိသိက်ခံတချို့ မြေကြီးပေါ်ရှိနေတုန်းမှာပဲ ဘုရားသခင့်လူမျိုးကို ဂေါဂ တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ (ယေဇ. ၃၈:၁၆) အဲဒီအခါ ဘုရားသခင့်လူမျိုး ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။ ဘုရင်ယောရှဖတ်ခေတ်မှာ ပေးခဲ့တဲ့ ဒီညွှန်ကြားချက်ကို သူတို့ လိုက်နာကြပါလိမ့်မယ်– ‘ဒီစစ်ပွဲမှာ မင်းတို့တိုက်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်နေရာမှာ ရပ်နေရုံပဲ။ မင်းတို့ကို ငါယေဟောဝါ ဘယ်လိုကယ်တင်မယ်ဆိုတာ စောင့်သာကြည့်နေလိုက်ပါ။ မကြောက်ကြနဲ့။ မထိတ်လန့်ကြနဲ့။’ (၆ ရာ. ၂၀:၁၇၊ ကဘ) ဘုရားသခင့်လူမျိုးကို ဂေါဂ စတင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် တစ်ချိန်ချိန်မှာ မြေကြီးပေါ်ကျန်နေသေးတဲ့ ဘိသိက်ခံအားလုံး ကောင်းကင်ကို ခေါ်ဆောင်ခံရလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက် ဂေါဂရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ကောင်းကင်ကနေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာ ဗျာဒိတ် ၁၇:၁၄ မှာ ရှင်းပြတယ်။ ဘုရားသခင့်လူမျိုးရဲ့ ရန်သူတွေဟာ “သိုးသငယ်နှင့် စစ်တိုက်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော် သိုးသငယ်သည် သခင်တကာတို့၏သခင်၊ ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင် ဖြစ်သောကြောင့် သူတို့ကို အောင်မြင်လိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ခေါ်ယူရွေးကောက်တော်မူခြင်း ခံရသော သစ္စာရှိသူတို့လည်း အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်။” ယေရှုဟာ ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ ဘိသိက်ခံဘုရင် ၁၄၄,၀၀၀ နဲ့အတူ မြေကြီးမှာရှိတဲ့ ဘုရားသခင့်လူမျိုးကို ကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
၁၇ အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲမှာ အဲဒီလိုကယ်တင်လိမ့်မယ်။ အဲဒါက ယေဟောဝါရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့နာမည်ကို ဘုန်းထင်ရှားစေလိမ့်မယ်။ (ဗျာ. ၁၆:၁၆) သစ္စာမရှိသူတွေ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိတ်တွေအဖြစ် တရားစီရင်ခံရသူအားလုံး ဖျက်ဆီးခံရပါလိမ့်မယ်။ မြေကြီးမှာ ဆိုးညစ်မှုတွေ ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ “လူအုပ်ကြီး” ဟာ အာမဂေဒုန်မှာ ကယ်တင်ခံရလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဇာတ်သိမ်းဖြစ်တဲ့ သိုးသငယ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲ စတင်နိုင်ပါပြီ။ (ဗျာ. ၂၁:၁-၄) * မြေကြီးမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအားလုံးဟာ ဘုရားသခင့်မျက်နှာသာ၊ မေတ္တာနဲ့ ရက်ရောမှုတွေကို အလျှံပယ်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ တကယ့်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးပါပဲ။ အဲဒီအချိန်ကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေကြတယ်။—၂ ပေတရု ၃:၁၃ ကိုဖတ်ပါ။
၁၈။ မကြာခင်ဖြစ်လာတော့မယ့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဖြစ်ရပ်တွေကို စောင့်မျှော်ရင်း ဘာလုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသင့်သလဲ။
၁၈ မကြာခင်ဖြစ်လာတော့မယ့် ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဖြစ်ရပ်တွေကို စောင့်မျှော်ရင်း အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးစီ ဘာလုပ်ဆောင်နေသင့်သလဲ။ တမန်တော်ပေတရု အခုလိုပြောတယ်– “ထိုအရာရှိသမျှတို့သည် အရည်ပျော်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် မည်သို့သောလူစား ဖြစ်သင့်သည်ကို ဆင်ခြင်ကြလော့။ သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသောအမူအကျင့်များ ကျင့်၍ ဘုရားတရားဆည်းကပ်သူများ ဖြစ်သင့်၏။ ယေဟောဝါဘုရား၏နေ့ ရောက်လာမည်ကို စောင့်မျှော်၍ စိတ်စွဲလမ်းကြလော့။ . . . သို့ဖြစ်၍ ချစ်ရသောသူတို့၊ သင်တို့သည် ဤအရာများကို စောင့်မျှော်လျက်ရှိကြသဖြင့် ရှေ့တော်မှောက်၌ အစွန်းအထင်း၊ အပြစ်အနာအဆာမရှိဘဲ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြလော့။” (၂ ပေ. ၃:၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄) ဒါကြောင့် အယူမှားဘာသာရေးနဲ့ မရောနှောဘဲ ဝတ်ပြုရေးမှာ ဆက်သန့်ရှင်းနေဖို့၊ ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဖြစ်တဲ့ ယေရှုခရစ်ကို ထောက်ခံဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြပါစို့။
^ စာပိုဒ်၊2၂၀၁၂၊ ဧပြီ ၁၅ ကင်းမျှော်စင် စာမျက်နှာ ၂၅-၂၆ ကိုကြည့်ပါ။
^ စာပိုဒ်၊ 14 ၂၀၁၃၊ ဇူလိုင် ၁၅ ကင်းမျှော်စင် စာမျက်နှာ ၁၃-၁၄ ကိုကြည့်ပါ။
^ စာပိုဒ်၊ 15 အဲဒီအချိန်မှာ အသက်ရှင်နေတဲ့ ဘိသိက်ခံတွေဟာ ကောင်းကင်ကို အသွေးအသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ခေါ်ဆောင်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ (၁ ကော. ၁၅:၄၈၊ ၄၉) ယေရှုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပျောက်သွားသလိုမျိုး သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေလည်း ပျောက်ပျက်သွားမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
^ စာပိုဒ်၊ 17 အစဉ်လိုက်ဖြစ်လာမယ့် ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်တချို့ကို ဆာလံ ၄၅ မှာလည်း ဖော်ပြထားတယ်။ ဦးဆုံး၊ ဘုရင်က စစ်တိုက်မယ်။ ပြီးနောက် မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပမယ်။
သိုးသငယ်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ– သိုးသငယ်နဲ့ သတို့သားဟာ ယေရှုခရစ်ကို ဆိုလိုတယ်။ သတို့သမီးဟာ ကောင်းကင်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘိသိက်ခံခရစ်ယာန် တစ်အုပ်စုလုံးကို ဆိုလိုတယ်။ မင်္ဂလာပွဲဟာ ယေရှုနဲ့ ထမြောက်လာတဲ့ ဘိသိက်ခံအားလုံး တွဲဖက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ပေါင်းစည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုတယ်။ ဘုရားသခင့် အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲပြီးနောက် ကောင်းကင်မှာ ဒီမင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်
မာဂေါဂပြည်သား ဂေါဂမင်း– ကြီးစွာသောဒုက္ခအတွင်း ဘုရားသခင့်လူမျိုးကို တိုက်ခိုက်ဖို့ နိုင်ငံပေါင်းစုံ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အုပ်စုတစ်စုဖြစ်တယ်
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇူလိုင် ၂၀၁၅